Linn Ko: Asphalt 8 Airborne APK+DATA (No Root+Offline) for Android
Asphalt 8 Airborne APK+DATA (No Root+Offline) for Android
စက်ရုပ်တွေအတွက် အသစ်ထွက်ပြိုင်ကားဂိမ်း Asphalt 8 : Airborne တင်လိုက်ပါပြီဗျာ… နာမည်ကြီးပြိုင်ကားဂိမ်းဖြစ်တဲ့ Asphalt ဟာ Asphalt 8: Airborne အနေနဲ့ထပ်မံထွက်ရှိလာပါပြီ။ ဒီဂိမ်းမှာတော့ Luxury ပြိုင်ကားစာရင်းဝင်တွေဖြစ်တဲ့ Lamborghini Veneno, Bugatti Veyron, Ferrari
FXX စတဲ့ ကားတွေနဲ့ Airborne လို့ခေါ်တဲ့ Feature သစ်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ယခင် Asphalt ပြိုင်ကားဂိမ်းတွေနဲ့မတူတဲ့ ကားပြိုင်ကွင်းနေရာ ကိုးခုကိုလည်းထပ်မံထည့်သွင်းပေးထားပါသေးတယ်။ ပြိုင်ကားချစ်သူတွေအတွက် ဆော့ကစားသင့်တဲ့ ပြိုင်ကားဂိမ်းကောင်းတစ်ခုပါ။ Asphalt 8: Airborne ကိုအောက်က Link မှာရယူနိင်ပါတယ်။
(( 100MB အပိုင်းလေးများ Dev-Host နဲ့ ပေးထားပါတယ် ) ) .
• Newly recorded high-fidelity car motor sounds for realistic audio immersion GET AIRBORNE
PLAY LINK: ASPHALT 8 AIRBORNE
ASPHALT 8 DATA Files
Dev-Host ( part – 100.00 MB )
Asphalt 8 Airborne DATA .part01.rar
Asphalt 8 Airborne DATA .part02.rar
Asphalt 8 Airborne DATA .part03.rar
Asphalt 8 Airborne DATA .part04.rar
Asphalt 8 Airborne DATA .part05.rar
Asphalt 8 Airborne DATA .part06.rar
Asphalt 8 Airborne DATA .part07.rar
Asphalt 8 Airborne DATA .part08.rar
Asphalt 8 Airborne DATA .part09.rar
Place data folder in SDCard/Android/Obb/ ဖိုင်သို့ ထည့်ပေးပါ
and Run Online @First Run. ( ပထမဆုံးတစ်ခါ အင်တာနက်ဖွင့်ပေးပါ ဂိမ်းဖွင့်ပါ )
Thanks to APKMANIA for the Cracked APK.
zround May 10, 2014 at 4:49 AM
thanks brader, good :)